West Ham oo Ka Badisay Kooxda Hull City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda West Ham United ayaa garoonka Boleyn Ground 3-0 uga badisay kooxda Hull City.
Labada ayaana wax gool ah iska dhalin qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabtay qeybtii danbe ee ciyaarta ayaa ciyaaryahan Andy Carroll goolka koowaad u dhaliyay kooxda West Ham United.
Ciyaaryahan Morgan Amalfitano ayaa goolka labaad u dhaliyay kooxda West Ham United,halka ciyaaryahan Stewart Downing uu goolka sedaxaad u sii raaciyay.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 36-dhibcood,halka kooxda Hull City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kulan Lagu soo dhaweeynayay Musharax Xasan Maxamed Nuur (Qalaad) oo Galkacyo lagu qabtay "Sawirro"